Isniin 18 Bisha Koobaad 2021
Rugta Ilkaha Clinique ii waa rug caafimaad orthodontic gaar ah oo loogu talagalay hogaamiyaha fikirka iyo iftiinka kaasoo adeegsanaya kuna baaraya farsamooyinka iyo agabyada ugu horumarsan anshaxdiisa. Architects-yada waxay ku sawireen fikrad gudaha ah oo ku saleysan isticmaalka orthodontic caadiga ah ee aaladaha caafimaadka saxda ah ee saxda ah sida mabda'a naqshadeynta inta u dhexeysa goobta oo dhan. Dusha sare ee darbiyada gudaha iyo alaabta guryaha ayaa si isdaba joog ah ugu biiriya qolof cad oo ay ku kala firidhsan yihiin cariirro huruud ah halkaasoo lagu rakibay teknolojiyadda caafimaad ee korantada.
Xarunta Dhaqanka Ee Da'da Dib Looga Fiirsado
Axad 17 Bisha Koobaad 2021
Xarunta Dhaqanka Ee Da'da Dib Looga Fiirsado Dhex dhexaadnimadi waxay jawaab u ahayd gudi gaar ah oo loo dhisay xarun dhaqan oo loogu talagalay tuulo yar oo aan wali la shaacin oo ku taal Gobolka Guangdong, oo taariikhdeedu 900 jirsatay xilligii Boqortooyada Song. Afarta dabaq, 7000 sqm horumarintiisu waxay udub dhexaad u tahay dhisme weyn oo dhagax ah oo loo yaqaan 'Ding Qi Stone', oo ah astaan asal ahaan ka timid tuulada. Fikradda naqshadda mashruucu waxay ku saleysan tahay muujinta taariikhda iyo dhaqanka tuuladi qadiimiga ah iyadoo xiriirineysa kuwii hore iyo kan cusub. Xarunta Dhaqanka waxay u taagan tahay sidii dib-u-fasiraad tuulo qadiim ah iyo u beddelidda qaab dhismeedka casriga ah.
Sabti 16 Bisha Koobaad 2021
Xarunta Iibintu Shaqo wanaagsan oo naqshadeyn ayaa kicin doonta dareenka dadka. Nashqadeeyaha wuxuu ka boodaa xusuusta qaab-dhaqameedka wuxuuna qibrad cusub u gelinayaa qaabdhismeedka iyo mustaqbal wanaagsan. Hoolka khibradda bii'ada ee bay'ada waxaa lagu dhisay meelaynta taxaddar leh ee rakibaadaha farshaxanka, dhaqdhaqaaqa cad ee bannaanka iyo qurxinta dusha sare ee ay ka shaqeeyaan alaabada iyo midabada. In lagu dhex jiro ma aha oo kaliya ku soo noqoshada dabeecadda, laakiin sidoo kale waa safar faaido leh.
Jimco 15 Bisha Koobaad 2021
Xarunta Iibintu Mowduuca mowduuca badda ee naqshada goobta, ku raaxee nafta nafta, oo leh barxadda 'pixel square' oo ah qeybta isgaarsiinta muuqaalka ah, u oggolow carruurta ciyaarta si ay u sahamiyaan daahfurka barashada iyo koritaanka ay noqdaan xudunta kiiska, meeleynta booska bilaashka ah waxay soo bandhigaysaa saamaynta khiyaali ah ee waxbarashada ee madadaalada. Foomka, cabirka, xarunta midabka, qaab-dhismeedka ilaa khibrada dareenka nafsiyeed, fikradda dhulku way sii socotaa oo kobcisaa markay dhammaan walxaha isku dhafan yihiin iyo isku dhacaan.
Khamiis 14 Bisha Koobaad 2021
Arbaco 13 Bisha Koobaad 2021
Xafiiska Iyada oo ku saleysan mawduuca furfurnaanta iyo sahaminta qotada dheer ee shirkadda, waxay sahamisay qaabeynta waxayna abuurtay is-dhexgal muuqaal ah oo ku saleysan karti muuqaal iyo sheeko astaan leh meeraha oo ah waxa ugu weyn hal abuurka. Qorshuhu wuxuu xaliyay seddexdan soosocda fikradaha cusub ee muuqaalka: Isku dheelitirka furnaanshaha booska iyo howlaha; Qaybinta iyo iskudarka aagagga waxqabadka; Joogtada iyo isbeddelka qaabdhismeedka guud ee aasaasiga ah.
Or2 Qaab Dhismeedka Isniin 1 Bisha Saddexaad
Eye of Ra' Qalabka Farshaxanka Ee Dadweynaha Magaaladu Axad 28 Bisha Labaad
NISSAN Calendar 2013 Kalandarka Sabti 27 Bisha Labaad
Rugta Ilkaha Xarunta Dhaqanka Ee Da'da Dib Looga Fiirsado Xarunta Iibintu Xarunta Iibintu Xarunta Iibintu Xafiiska